Musharixii u horeeyay oo soo dhaweeyay dhaarinta Xildhibaannada cusub ee Galmudug | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Musharixii u horeeyay oo soo dhaweeyay dhaarinta Xildhibaannada cusub ee Galmudug
Musharixii u horeeyay oo soo dhaweeyay dhaarinta Xildhibaannada cusub ee Galmudug
C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) oo ka mid ah musharixiinta ugu cad cad ee ku tartamaya xilka madaxtinimo ee Galmudug ayaa soo dhaweeyay dhaarinta Xildhibaanada oo maanta ka dhacday Caasimadda gobolka Galgaduud.
Xildhibaan Odowaa oo galabta Suxufiyiinta la hadlay ayaa sheegay in mudo 8 bilood ah ay socotay howlaha lagu soo xulayay baarlamaanka Galmudug, maantana ay tahay wax lagu farxo in Xildhibaanada la dhaariyo, si howlaha dhiman loo dar dar galiyo
Mr. Odawaa ayaa dhinaca kale ku taliyay in la soo dhameystiro Lixda xubnood ee ka harsan baarlamaanka, kuwaasoo uu tilmaanay iney u maqan yihiin arrimo dana gaara looga leeyahay, balse ay diyaar yihiin Odayaashii soo xuli lahaa.
Waxa uu dhinaca kale Guddiga farsamo ee dhismaha Galmudug iyo madaxda sare ee dalka xusuusiyay in wado dheer loo soo marau in la helo maamul dadka deegaanka ay ku mideysan yihiin, loona baahan yahay inaan la beer dareen fursadaha haatan muuqda.
C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) oo hore u soo noqday wasiirkii arrimaha gudaha ee soo dhisay Galmudug, ayaa soo dhaweeyay xal u helista tabashooyinkii Ahlu-Suna, wuxuuna ka digay in laga weeciyo howsha socota sidii Shacabka Galmudug ay u yeelan lahaayeen maamul ka shaqeeya danahooda.
Previous articleAl-Shabaab oo burburiyay Xarun Isgaarsiin ku taal deegaan u dhow Gaarisa
Next articleXildhibaan Ganey “Waa nasiib darro in Safaaradihii dalka dibadiisa ahaa in loo adeegsado caburin siyaasadeed”